SomaliTalk.com » QAYLA DHAAN: Waa ayo dadka ‘AF-SOOMAALIGA’ ku hadla? (Qalinkii Maxamed Xaaji)
Dalka Soomaaliya oo tan iyo burburkii kusoo baxay dal bilaa walaal, bilaa saaxiib ah ayay taasi keentay inay dunidu nagu nacayso erayga dal fashilmay ( A failed state) oo taxa ama liiska lasoo saaro aan sanadkiiba safka hore ka cariirsanno balse mida calool xumada lihi intaa oo dhan maahee waa dadkii Soomaaliyeed oo iyagoo aan nasteex caalami ah lahayn iyagii is necbaystay.
FIIRO GAAR AH: Magacan ’’Soomaali’’ u gaar maaha dad gobol gaar ah degan marka ay timaaddo shanta Soomaalida loo qaybshay iyo 15-ka lagusii dhuftay haatan (5 x 15 = waa 75-ta aan nahay), lkn wuxuu u taagan yahay qof kasta oo Soomaali ah meelkasta oo uu ku dhaqan yahay min Jabuuti ilaa Gaarisa, min Jigjiga ilaa Xamar Jajab. Soomaalidu waxay la mid tahay Oromada, Canfarta, Tigreega, Amxaarada IWM oo waa qabiil qura meeshii ay doontaba ha joogtee.
Hadii aan sii iftiimiyo umadaha Carabta oo anaga marka naloo eego aad iyo aad nooga badan dad ahaan, degaan ahaanna nooga ballaaran ma adeegsadaan eraygan aan fahmi la’nahay oo kale oo ma yiraahdaan ’’Dadka Af-Carabiga ku hadla’’ .